Fardahaasi ma cunaan? Tilmaam si aad ugu quudid si sax ah | Fardaha Noti
Monica Sanchez | | Quudinta
Fardahaasi ma cunaan? Miyaad hadda heshay ama korsatay faras oo jeclaan lahayd inuu weligiis caafimaad ahaado? In kasta oo taasi, nasiib daro, aysan suurta gal ahayn maadaama aanan awoodi doonin inaan ka difaacno dhammaan sheyga iyo dulinleyda waxyeeli kara, waa waxaan ku siin karnaa cuntada ugu fiican si aad awood ugu yeelatid difaaca jirka oo xoogan. Qaabkaas, waxaad awood u yeelan doontaa inaad si fudud uga bogsato cudurrada kugu dhici kara inta aad nooshahay.
Laakiin, in farduhu wax cunaan? Haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ee aan mid qabno, waxaa hubaal ah inaan shaki badan ka qabno arrintan, sidaas darteed waxaan isku dayi doonnaa inaan dhammaantood hoos ku xallino.
1 Xayawaan noocee ah ayaa farasku yahay?
2 Maxay farduhu cunaan?
3 Immisa kiilo oo cunto ah ayaan siiyaa?
4 Ma inaad ka taxaddartaa cuntada qaarkood?
Xayawaan noocee ah ayaa farasku yahay?
Sawirka - Myhorse.es
Saaxiibkeen afarta lugood leh waa naasley xayawaan leh, oo ah, waxay leedahay qoobab. Sidaa darteed, ma qaban karto ugaarsi, markaa waxay noqoneysaa ugaarsi macquul ah. Maxaa intaa ka badan, daamankoodu wuxuu u samaysan yahay inay cawska ku calashaan, laakiin maahan wax xarago leh sida dibiga miski, laakiin sidoo kale wuu cuni karaa ubaxyo iyo miro.
Nidaamkaaga dheef-shiidka, haddii aan ku aragno sawirka, wuxuu umuuqan karaa inuu aad uga duwanyahay kuweenna runtiina waa inay tahay. Waana taas, inta aynu nahay wax walba, isagu waa geed-cagaaran. Bari wuxuu ka bilaabmaa afka. Dhexdeeda, cuntada waa la ruugaa oo waxaa lagu qasi karaa candhuufta si markaa ay ugu gudubto hunguriga, oo ku dhammaada waalka loo yaqaan 'cardia' oo kaliya u fura dhinaca caloosha. Kala duwanaanshahan ayaa macnaheedu yahay in farasku uusan daacin karin ama matagi karin, sidaas darteed waxaa laga yaabaa inaad ku xanuunsato calool xanuun ama calool xanuun.
El caloosha Waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo waaweyn, qanjidhada iyo qanjidhada. Waxay leedahay qiyaas qiyaas ah 15 litir iyo pH aad u acidic ah: inta u dhexeysa 1.5 iyo 2, waa lagama maarmaan in la awoodo in laga soo nuugo borotiinka cawska. Markii aan gudubno xubintan muhiimka ah, waxaan helnaa xiidmaha yar, kaas oo loo kala qaybiyey dawada, jejunum iyo ileum, dhererkeeduna yahay 21-25m. PH sidoo kale wuu hooseeyaa, laakiin xoogaa wuu ka sarreeyaa: inta u dhexeysa 2.5 iyo 3.5. Dhexdeeda, ficil ahaan dhammaan nafaqooyinka waa la nuugo: dufanka, karbohaydraytyada, iyo macdanta ku jirta ilma-galeenka.
Ugu dambeyntii, waxaan ka heli xiidmaha waaweyn, kaas oo loo qaybiyay cecum, colon iyo malawadka. Waxay ku saabsan tahay 7 mitir oo dherer ah waxayna leedahay pH inta udhaxeysa 6 iyo 7. Waxaa jira 400 nooc oo kaladuwan oo nooleyaal ah kuwaas oo mas'uul ka ah inay ka soo nuugaan fiberka cuntada uu faraska cuno
Geedi socodka oo dhan, yacni, laga bilaabo marka cuntada afkeeda gasho ilaa malawadka laga saaro waxay qaadan kartaa inta u dhexeysa 22 saacadood ilaa 2 maalmood, iyadoo kuxiran tayada aad leedahay iyo inta aad liqday.
Maxay farduhu cunaan?
Si aad caafimaad wanaagsan u hesho aad ayey muhiim u tahay in la ixtiraamo dareenka xayawaan kasta. Marka laga hadlayo faraska, in uu yahay geedo yaryar waxa macno ah ma samaynayso in la siiyo, tusaale ahaan, hilibka maaddaama, ay u dheer tahay waqti lumis iyo lacag, jidhkiisu ma garanaynin sida saxda ah ee loo shiido. Sidaa darteed, waa inaad siisaa caws, ubax iyo miro.
Cuntada farasku waxay inta badan ka kooban tahay waxyaabaha soo socda:
Avena: wuxuu hodan ku yahay borotiinada, dufanka iyo istaarijka. Waa isha faraska ugu weyn ee laga helo tamarta.
Budada toonta: waa antiparasitic dabiici ah oo xoog badan, oo aan wax saameyn ah ku yeelanin xubinta taranka, ayaa si joogto ah loo siin karaa.
Shaciir: wuxuu kaa caawinayaa inaad qaab yeelato.
Hay: lagama maarmaan u ah faraska inuu helo tamarta uu u baahan yahay.
Miraha iyo xididdada: waxay bixiyaan fitamiino iyo macaadin.
Flaxseed: waxay hodan ku tahay borotiinka waxayna leedahay waxyaabo kiciya. Waa in la keenaa iyadoo la kariyey.
Galley: waxay bixisaa tamar badan, laakiin waxay ku yar tahay borotiinka waxayna noqon kartaa xoogaa aan la kari karin.
Macdanta- Looma baahna, laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in lagaa siiyo macdanno kaabis ahaan ah.
Badbaadiyey qamadi: 1kg maalin kasta ayaa ku filan.
Immisa kiilo oo cunto ah ayaan siiyaa?
Faras wuxuu u baahan doonaa inuu wax cuno dhowr jeer maalintii, laakiin waa in maanka lagu hayaa in calooshiisa yar tahay oo aanan siin karin tiro badan. Had iyo jeer way fiicnaan doontaa in la siiyo ugu badnaan 1,8kg 3 ama 4 quudin., Intii aad siin lahayd 3 ama 4kg hal mar.
Hadda, haddii aan heysanno isaga oo si xor ah u daaqaya, waxaan arki doonnaa inuu ku qaadan karo inta u dhexeysa 15 illaa 18 saacadood maalin kasta oo wax cunaya, sidaas darteedna aan loo baahnayn in la siiyo cunno dheeraad ah (marka laga reebo, dabcan, waxaan dooneynaa inaan siino a karooto-qaabeeya tusaale ahaan waqti ka waqti).
Ma inaad ka taxaddartaa cuntada qaarkood?
Runtu waxay tahay in haa, gaar ahaan la alfalfa maadaama ay aad ugu hodan tahay borotiinka. Intaas waxaa sii dheer, saamiga kaalshiyam / fosfooraska ayaa ka sarreeya waxa xayawaanku u baahan yahay. Tani waxay sababi kartaa kala-soocidda lafaha iyo abuuritaanka dhagaxyo ku jira mindhicirada. Sidoo kale waa inaadan ku xadgudbin badarka- In badan oo ka mid ahi waxay sababi karaan nabarro, casiraad ama soosaarida insulinta oo kordha.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani uu wax kuu taray adiga wax badana aad ka baratay in farduhu cunaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Quudinta » Fardahaasi ma cunaan?